Iselfowuni entsha yePalm njengenye yeyona Android inomtsalane | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Isundu sivelisa iselfowuni yakho ye-Android ene-intshi ezi-3,3 kuphela zesikrini
Iminyaka emincinci apho eyona smartphone inqabileyo, njengeGPS SII ye-Samsung, ingakhange idlule kwi-4,3 ″. Ukuvuna, ngoku sinayo iselfowuni entsha enemilinganiselo emincinci kakhulu ngeselula yePalm.
Isundu yinkampani eyayinodumo olukhulu ngee-PDA zayo kunye nenkqubo yokusebenza yePalm webOS. Ngoku ufuna ukubuyela kulawulo lwakhe nge Ifowuni ephathwayo ye-Android ngaphandle kwezo unokubona kuzo zonke zikhefu ukusuka kumaziko abaluleke kakhulu okuthenga.
I-Palm entsha ene-Android, esiyifumene kwakudlulileyo, luphawulwa isikrini sayo se-intshi eyi-3,3 ngesisombululo se-HD (1280 × 720) kunye ne-445PPI. Into enomdla malunga nale mobile yePalm kukuba ingaphakathi alishiyi i-hardware, kuba ine-Qualcomm Snapdragon 435 octa-core chip, i-3GB ye-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi okuhlala kwi-32GB.
Ngokubhekisele kwiikhamera, injalo I-12MP ephambili ene-LED, kunye nenye i-8MP ngaphambili. Kwakhona ayifutshane kwimikhwa enje ngoqhagamshelo lohlobo C lwe-USB, uthuli oluqinisekisiweyo lwe-IP68 kunye nokuxhathisa kwamanzi, kunye nohlobo oluqhelekileyo lwe4G / LTE kunye nokunxibelelana kweWiFi.
Okokugqibela sithetha ngebhetri yayo ene-800 mAh, ezinye Imilinganiselo ye-50 x 97 x 7,4mm, kunye nobunzima obufikelela kuma-62,5 amagremu. Inguqulelo ye-Android ebalekayo yi-Android 8.1 Oreo.
Inoyilo ngononophelo inika ubuhle beprimiyamu Kwaye nokuba ayipeyintwanga nokuba inophawu "lwesundu" ngasemva kwayo. Ixabiso libaxekile, kuba inokuthengwa kuphela kumsebenzisi weVerizon nge $ 349,99, emalunga nee-euro ezingama-302 zokutshintsha.
El Isoftware yesundu yinto eqinisekileyo yokutsala umdla wabaninzi, Kodwa ukuba ngexesha apho kufunwa izikrini ezinkulu, kubonakala ngathi ayizukuba nendawo enkulu kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Isundu sivelisa iselfowuni yakho ye-Android ene-intshi ezi-3,3 kuphela zesikrini
Ungazazi njani zonke iiapps kunye nemidlalo oyithengileyo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle